Dhimasho iyo dhaawac ka dhashay Shaqaaqo ka dhacday Walanweyn | SMC
Home WARARKA MAANTA Dhimasho iyo dhaawac ka dhashay Shaqaaqo ka dhacday Walanweyn
Dhimasho iyo dhaawac ka dhashay Shaqaaqo ka dhacday Walanweyn
Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay is rasaaseyn degmada Walanweyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose ku dhex-martay ciidamo ka wada tirsan daraawiishta maylanda oo dhawan la geeyay degmadaas.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in is rasaaseynta oo ka dhacday suuqa muuri ee u dhow Aargada Dagmada Wanlaweyn ay ka dambeysay, kadib markii uu khilaaf soo kala dhex-galay laba kamid ah Askarta sidaasina uu dagalka ku bilaawday.
Inta la xaqiijiyay is rasaaseynta ayaa waxaa ku geeriyooday Saddex Ruux oo laba ka mid ah ay yihiin Ciidamadii dagaalamay halka ay ku dhaawacmeen laba qof oo mid kamid ah haweeney tahay oo xaaladeeda caafimaad ay aad u liidato.
Wararka la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in weli xaalad kacsanaan ah laga dareemayo degmada Walanwyen ee Gobolka Shabeellaha Hoose, isla markaana uu xiran yahay suuqa Muuri oo ah halak ay labada ciidan ku wada dagaalameen.
Degmada Walanweyn ayaa waxaa dhowr jeer oo hore ka dhacay dagaal beeleedyos oo laab laabtay,waxaana taasi ay sababtay in Dowladda Soomaaliya iyo Maamulka Deegaanka ay Ciidamo geeyaan.
Previous articleSAWIRRO: Shirka Dowladda dhexe iyo Dowlad goboleedyada oo goordhow furmay
Next articleEedeysanayaal ku heyb ah Madaxweyne Farmaajo Oo xabsiga laga sii daayey